ठूला दलबाट देश बन्छ भन्नु साढेको टाङ मुनी बाल्टी थाप्नु जस्तै हो : राजेन्द्र लिङ्देन - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बिहीबार, चैत १७ २०७८
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला दलबाट देश बन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु दूध दुहनका लागि साढेको टाङ मुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राप्रपाले तनहुँको दमौलीस्थित खुल्ला मैदानमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले भने, ‘साँढेको टाङमुनी बाल्टी थापेर साढेले दूध दिएन भनेर त्यसलाई सुम्सुम्याउँदा, कन्याउँदा, हैन यसलाई खाना पुगेन भनेर दाना थप्दा पनि दूध दिँदैन । ठूला दलबाट देश बन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु हो त्यस्तै हो, ।’
. देश समृद्ध बनाउने भए हलोमा मतदान गर्नुहोस् : राजेन्द्र लिङ्देन
. राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको दाबी : नेता र काला व्यापारीले घरमा नोट थन्क्याउँदा आर्थिक संकट आयो
. कांग्रेस, एमाले र माओवादी कार्यकर्ताले राजा नै चाहिन्छ भन्ने थाले : राजेन्द्र लिङ्देन
. देश कांग्रेस, एमाले र माओवादी गठबन्धनको शिकार भएको छ : राजेन्द्र लिङ्देन
. गृहजिल्लामा अध्यक्ष लिङ्देनको शक्ति प्रदर्शन, हजारौंको सहभागिता मुख्य दलहरूलाई चुनौती
शक्ति राष्ट्र नेपालमा रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको लिङदेनले बताए । नेपाललाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनाइएको उनको भनाई छ ।
अगाडि थप्दै भने, ‘कुनै बेला हामीले युक्रेनको नियति व्यहोर्नपर्ने अवस्था आउने खतरा हाम्रो सामु देखिएको छ । उनीहरूको आलोकाँचो व्यवहारले हुने क्षति ठूला पार्टीले मात्र व्यहोर्नुपर्दैन । सिँगो देश र जनताले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, चैत २० २०७८ २२:०३:५५